Mohamed Salah oo la isku heysto - CIYAARO.COM
Home / Transfer / Mohamed Salah oo la isku heysto	Mohamed Salah oo la isku heysto
By Gamadiid Guurre	Updated: September 11, 2015	Tweet
Fiorentina ayaa dacwo u gudbisay hay’adda maamusha kubadda cagta adduunka ee Fifa, markii ay Chelsea ku eedeysay in ay jabisay balantii ay wada galeen ee la xariirtay deynta Mohamed Salah, kaasoo haatan amaah kale ugu wareegay Roma.
Salah, oo 23 sano jir ah, ayaa 9 gool u dhaliyay Fiorentina 29 kulan oo uu u ciyaaray. Fiorentina waxey ku doodeysaa in ay xaq u laheyd in loo kordhiyay heshiiska deynta ah ee ay ku heysatay Salah, isla markaana ay qalad tahay in Roma la siiyo Salah.
Waxey Chelsea ku eedeysay balan ka baxa sidaa dartee waxey ashtako u dirtay FIFA taasoo haatan baareysa arrinta.
Related posts:Aguero oo u balan qaaday inuu la joogayo CitySalomon Kalou oo 6 sano kadib ka tagay Chelsea Maradona oo laga raacdeeyay shaqadii Al Wasl Share/Bookmark	new